लकडाउनको समय – निद्रा नलागेर हैरान हुनुन्छ भने अपनाउनुहोस् यी उपाय ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनको समय – निद्रा नलागेर हैरान हुनुन्छ भने अपनाउनुहोस् यी उपाय !
यतिबेला विश्व नै कोरोनाको सन्त्रास खेपिरहेको छ। यसैबीच नेपाल सरकारले पनि कोरोना नियन्त्रणमा सहजका लागि देशव्यापीरुपमा लकडाउन लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसहरु निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट ग्रस्त बनेका छन् । निद्रा राम्रोसँग नलाग्दा धेरै समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छ भने रोगको कारक पनि निद्रा बन्न सक्छ ।
यदी तपाईलाई पनि निद्रा नलाग्ने समस्या छ भने यी टिप्सहरुलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ :
तातो पानीले नुहाउने– तातो पानीले नुहाउँदा तपाईलाई रिल्याक्स मात्र होइन राम्रो निद्रा पनि पर्छ । सुत्नुभन्दा करिब २ घन्टा पहिला तातोपानीले नुहाउदा शरीरको तापक्रम पनि सामान्य अवस्थामा पुग्छ र तपाईंलाई निद्रा लाग्छ ।
लेवेन्डुलाको तेलको प्रयोग– पुदिना परिवारको एक फूलको नाम लेवेन्डर हो जसको तेलको प्रयोगले राम्रोसँग निद्रा लाग्छ ।
तातो दूध र मह– तातो दूधमा मह मिलाएर पानी पिउनाले राम्रो निद्रा लाग्दछ ।
सुत्नुअघि नगर्नुहोस् यी काम :
सुत्नुअघि मोबाइल चलाउने वा लामोसमय टेलिभिजन हेर्नु हुँदैन ।